အရပ်ရှည်တဲ့မမတွေသာ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အခက်အခဲပိစိလေးတွေ…😅 – Trend.com.mm
Posted on September 11, 2018 by Noel
တကယ်တော့ အရပ်ရှည်တာဟာ ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုပြောလို့ အရပ်ပုတဲ့သူတွေကို နှိမ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ်လည်းအရပ်မရှည်ပါဘူး 🤭မိန်းကလေး၊ယောက်ျားလေး အရပ်ရှည်တာက အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သလို သူတို့တွေကြုံရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။မိန်းကလေးထဲမှာဆို ၅ပေ ၇လက်မကျော်ရင် International Height ပါပဲ။ဒီလိုဂုဏ်ယူစရာရှိပါသော်လည်း သူတို့တွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေဆိုတာ…
ရှော့ပင်းထွက်ပြီဆို ကိုယ်သဘောကျတဲ့ဘောင်းဘီလေးတွေ့လို့ဝတ်ကြည့်လိုက် ကွက်တိဖြစ်ဖို့ဆိုတာရှားမှရှား။ကိုယ့်ရဲ့ခြေကျင်းဝတ်ထိရောက်တဲ့ဘောင်းဘီရှည်ဆို ကမ္ဘာပတ်ပြီးရှာရမလို ရှော့ပင်းထွက်ရင် တအားပင်ပန်းပါတယ်။ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်လှပတဲ့ ဘောင်းဘီရှည်တွေက Brand တံဆိပ်အနည်းငယ်သာရှိတာ အရပ်ရှည်ခြင်းရဲ့ ပိစိဆိုးကျိုးလေးပေါ့ 😅
၂)စကတ်ဝတ်မလား၊ဘောင်းဘီတိုဝတ်မလား၊ဂါဝန်ဝတ်မလား ကိုယ်နဲ့ဆို တိုကိုတိုလွန်းတယ်
ဂါဝန်လှလှလေးဝတ်ချင်ရင်လည်း သိပ်မရှည်လွန်း၊မတိုလွန်းတဲ့ဂါဝန်ကိုရှာနိုင်မှပါ။ပုံမှန်ဂါဝန်တစ်ထည်ဟာ အရပ်ရှည်တဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ တိုနေပါသေးတယ်။အတိုကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တောင် အရပ်ရှည်လွန်းတဲ့ကိုယ်နဲ့ ဒီဂါဝန်နဲ့က လိုက်မလိုက်ဆိုတာ ကြည့်ရပါသေးတယ် 🙄
၃)စားပွဲတွေ၊ထိုင်ခုံတွေက ကိုယ့်အတွက် နိမ့်လွန်းနေတယ်
ဒီအခက်အခဲကတော့ အများဆုံးကြုံတွေ့ရတယ်ပြောရမလား။တစ်ခြားသူတွေအတွက်ပုံမှန်အဆင်ပြေနေချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက်စားပွဲက နိမ့်လွန်းနေတယ်။ဒီစားပွဲခုံတွေ၊ကုလားထိုင်တွေဆိုတာလည်း ပျမ်းမျှလူတစ်ယောက်နဲ့သင့်တော်အောင်စီစဉ်ထုတ်လုပ်ထားတာဆိုတော့လည်း…😑
၄)ကား၊လေယာဉ်စီးတဲ့အခါ ကျဉ်းကျပ်မှုဆိုတာ မခံစားချင်မှအဆုံး
ကားစီးရင်လည်း ထိုင်ခုံတွေက ကိုယ့်ခြေထောက်၊ကိုယ့်ဒူးနဲ့တိုက်နေတယ်၊ကျပ်နေတယ်။လေယာဉ်ဆိုလည်း ကိုယ်ကအရပ်ရှည်တော့ သူများတွေအတွက်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက်တော့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရုံ။ကားပေါ်မှာထိုင်ခုံရရင်တောင် မတ်တပ်ရပ်တာကမှ သူများထက်ခေါင်းတစ်လုံးပိုမြင့်ပါသေးတယ် 😒
၅)Messy bun ဆံပင်စတိုင်လ်မျိုးလုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူး
ဒီလိုမျိုးဆံပင်သာထုံးကြည့်ပါလား။ကိုယ်က အရပ်ရှည်ရတဲ့ကြားထဲ ခေါင်းက ဟိုဟာနဲ့တိုက်မိ၊ဒီဟာနဲ့တိုက်မိဖြစ်ပြီး ဆံပင်ကပိုတောင်ပွသွားဦးမယ်။ကားစီးရင်လည်း ကားမျက်နှာကြက်နဲ့ထိနေတယ်တို့ ဘာတို့။ဒီတော့ Messy Bun က အရေးကြီးပွဲတွေဘာတွေသွားရမယ့်အချိန်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့အချိန်မထုံးထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ 😅
၆)ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အရပ်ရှည်ရတဲ့ဆိုးကွက်လေးတွေပိုမြင်ရတယ်ဟုတ် 🙄
သူငယ်ချင်းတွေအုပ်စုလိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းခေါင်းက အားလုံးထက်ပိုမြင့်နေရင် ဓာတ်ပုံကကြည့်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့လိုကြည့်မကောင်းရင်သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာလည်းငြိမ်နေမှာမဟုတ်။သူတို့နဲ့ညီအောင် ဒူးညွှတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ထိုင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ခိုင်းကြမှာပါပဲ။
ဆဲလ်ဖီဆွဲရင်တော့ အရပ်ရှည်တဲ့သူဆိုတာ ဆဲလ်ဖီစတစ်လိုမျိုးပဲ 🙃
ဟုတ်ပါတယ်။အရပ်ရှည်တဲ့မမတွေအတွက် စောင်ဆိုတာ အပေါ်ခြုံရင်အောက်လွတ်၊ခြေဖျားထိခြုံရင်အပေါ်လွတ်နဲ့ စောင်တောင် ကိုယ့်ဘက်မှာမရှိပါဘူးနော်။တော်ရုံစောင်နဲ့တော့ တက်မလာနဲ့ 😅ဒါတွေကတော့ International Height မမတွေသာ သိနိုင်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေပါပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား ? 😉
တကယျတော့ အရပျရှညျတာဟာ ကောငျးပါတယျ။ဒီလိုပွောလို့ အရပျပုတဲ့သူတှကေို နှိမျတာမဟုတျဘူးနျော။ကိုယျလညျးအရပျမရှညျပါဘူး 🤭မိနျးကလေး၊ယောကျြားလေး အရပျရှညျတာက အားသာခကျြတဈခုဖွဈသလို သူတို့တှကွေုံရတဲ့အခကျအခဲလေးတှဆေိုတာလညျးရှိပါတယျ။မိနျးကလေးထဲမှာဆို ၅ပေ ရလကျမကြျောရငျ International Height ပါပဲ။ဒီလိုဂုဏျယူစရာရှိပါသျောလညျး သူတို့တှေ ကွုံတှရေ့တဲ့အခကျအခဲလေးတှဆေိုတာ…
ရှော့ပငျးထှကျပွီဆို ကိုယျသဘောကတြဲ့ဘောငျးဘီလေးတှလေို့ဝတျကွညျ့လိုကျ ကှကျတိဖွဈဖို့ဆိုတာရှားမှရှား။ကိုယျ့ရဲ့ခွကေငျြးဝတျထိရောကျတဲ့ဘောငျးဘီရှညျဆို ကမ်ဘာပတျပွီးရှာရမလို ရှော့ပငျးထှကျရငျ တအားပငျပနျးပါတယျ။ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျလှပတဲ့ ဘောငျးဘီရှညျတှကေ Brand တံဆိပျအနညျးငယျသာရှိတာ အရပျရှညျခွငျးရဲ့ ပိစိဆိုးကြိုးလေးပေါ့ 😅
၂)စကတျဝတျမလား၊ဘောငျးဘီတိုဝတျမလား၊ဂါဝနျဝတျမလား ကိုယျနဲ့ဆို တိုကိုတိုလှနျးတယျ
ဂါဝနျလှလှလေးဝတျခငျြရငျလညျး သိပျမရှညျလှနျး၊မတိုလှနျးတဲ့ဂါဝနျကိုရှာနိုငျမှပါ။ပုံမှနျဂါဝနျတဈထညျဟာ အရပျရှညျတဲ့မိနျးကလေးတှအေတှကျတော့ တိုနပေါသေးတယျ။အတိုကွိုကျတဲ့သူဆိုရငျတောငျ အရပျရှညျလှနျးတဲ့ကိုယျနဲ့ ဒီဂါဝနျနဲ့က လိုကျမလိုကျဆိုတာ ကွညျ့ရပါသေးတယျ 🙄
၃)စားပှဲတှေ၊ထိုငျခုံတှကေ ကိုယျ့အတှကျ နိမျ့လှနျးနတေယျ
ဒီအခကျအခဲကတော့ အမြားဆုံးကွုံတှရေ့တယျပွောရမလား။တဈခွားသူတှအေတှကျပုံမှနျအဆငျပွနေခြေိနျမှာ ကိုယျ့အတှကျစားပှဲက နိမျ့လှနျးနတေယျ။ဒီစားပှဲခုံတှေ၊ကုလားထိုငျတှဆေိုတာလညျး ပမျြးမြှလူတဈယောကျနဲ့သငျ့တျောအောငျစီစဉျထုတျလုပျထားတာဆိုတော့လညျး…😑
၄)ကား၊လယောဉျစီးတဲ့အခါ ကဉျြးကပျြမှုဆိုတာ မခံစားခငျြမှအဆုံး
ကားစီးရငျလညျး ထိုငျခုံတှကေ ကိုယျ့ခွထေောကျ၊ကိုယျ့ဒူးနဲ့တိုကျနတေယျ၊ကပျြနတေယျ။လယောဉျဆိုလညျး ကိုယျကအရပျရှညျတော့ သူမြားတှအေတှကျသကျတောငျ့သကျသာဖွဈပမေဲ့ ကိုယျ့အတှကျတော့ အဆငျပွတေယျဆိုရုံ။ကားပျေါမှာထိုငျခုံရရငျတောငျ မတျတပျရပျတာကမှ သူမြားထကျခေါငျးတဈလုံးပိုမွငျ့ပါသေးတယျ 😒
၅)Messy bun ဆံပငျစတိုငျလျမြိုးလုပျဖို့အဆငျမပွဘေူး
ဒီလိုမြိုးဆံပငျသာထုံးကွညျ့ပါလား။ကိုယျက အရပျရှညျရတဲ့ကွားထဲ ခေါငျးက ဟိုဟာနဲ့တိုကျမိ၊ဒီဟာနဲ့တိုကျမိဖွဈပွီး ဆံပငျကပိုတောငျပှသှားဦးမယျ။ကားစီးရငျလညျး ကားမကျြနှာကွကျနဲ့ထိနတေယျတို့ ဘာတို့။ဒီတော့ Messy Bun က အရေးကွီးပှဲတှဘောတှသှေားရမယျ့အခြိနျကလှဲလို့ ကနျြတဲ့အခြိနျမထုံးထားတာအကောငျးဆုံးပါပဲ 😅
၆)ဓာတျပုံရိုကျတဲ့အခါ အရပျရှညျရတဲ့ဆိုးကှကျလေးတှပေိုမွငျရတယျဟုတျ 🙄
သူငယျခငျြးတှအေုပျစုလိုကျဓာတျပုံရိုကျတဲ့အခါ ကိုယျတဈယောကျတညျးခေါငျးက အားလုံးထကျပိုမွငျ့နရေငျ ဓာတျပုံကကွညျ့ကောငျးမှာမဟုတျဘူးလေ။အဲ့လိုကွညျ့မကောငျးရငျသူငယျခငျြးတှဆေိုတာလညျးငွိမျနမှောမဟုတျ။သူတို့နဲ့ညီအောငျ ဒူးညှတျပွီးဖွဈဖွဈ၊ထိုငျပွီးဖွဈဖွဈရိုကျခိုငျးကွမှာပါပဲ။
ဆဲလျဖီဆှဲရငျတော့ အရပျရှညျတဲ့သူဆိုတာ ဆဲလျဖီစတဈလိုမြိုးပဲ 🙃
ဟုတျပါတယျ။အရပျရှညျတဲ့မမတှအေတှကျ စောငျဆိုတာ အပျေါခွုံရငျအောကျလှတျ၊ခွဖြေားထိခွုံရငျအပျေါလှတျနဲ့ စောငျတောငျ ကိုယျ့ဘကျမှာမရှိပါဘူးနျော။တျောရုံစောငျနဲ့တော့ တကျမလာနဲ့ 😅ဒါတှကေတော့ International Height မမတှသော သိနိုငျတဲ့အခကျအခဲလေးတှပေါပဲ။ဟုတျရဲ့လား ? 😉ဒါတှကေတော့ International Height မမတှသော သိနိုငျတဲ့အခကျအခဲလေးတှပေေါ့။ဟုတျရဲ့လား ? 😉
ကလေးယူဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ ဇနီးသည်များ ဒါလေးတွေတော့ သိထားသင့်